Ogaden News Agency (ONA) – Gudoomiyaha Gudiga qoxootiga Ogaadeeniya oo ka qayeb galay Maalinta Qoxootiga aduunka.
Gudoomiyaha Gudiga qoxootiga Ogaadeeniya oo ka qayeb galay Maalinta Qoxootiga aduunka.
Xuska maalinta Qaxootiga Adduunka ayaa waxa lagu qabtay Xeryaha Qaxootiga ee Kenya ee Ifo 1 iyo Ifo 3iyo sidoo kale Dhagaxley iyo Xagardheer. Xeryahaas Qaxootiga oo ay ku suganyihiin shacabkena Ogadeniya ee kaso qaxay dhulki hooyo ayaa ah dad abaabulan islamarkaasna ka dhex muuqda Xeryahaas. Qaxootiga Ogadeniya ayaa si fiican isaga dhex abaabulay Xeryahaas waxayna bandhiga kaga qeyb galay Barnaamijyo ay kamid yihiin inay kusoo saareen Hidaha iyo dhaqankooda waxayna goobtaas kuso bandhigeen ciyaaro ay kamid yihiin DHaantada oo aad looga helay.
Magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya waxaa lagu dhigay munaasabada maalinta qoxootga aduunka waxaana maanta munaasabada ka qayeb galay gudoomiyaha gudiga qoxootiga Ogaadeeniya ee dalka Kenya.
Gudoomiyaha oo ka qayeb galay shir maalintii shalay dhacay kaas oo ay isugu yimaadeen in kabadan 40 qawmiyadood ayaa shirkaas waxaa lagaga dooday qoxootiga iyo sida ay oola noolaan lahaayeen dadka reer Kenya maadaam dalka Kenya ay marti u yihiin boqolaal qoxooti ah kuwaas oo ka yimid dalal kala duwan oo Afrikan ah. Gudomiyaha hay’ada qoxootiga Ogaadeeniya oo doodaas ka hadalyey ayaa yidhi qiyaasta laga bixiyo tirada qoxootiga Ogaadeeniya ee jooga dalka Kenya waa lix boqol oo kun.
Sidoo kalena Munaasabadii maanta ayuu gudoomiyahu ka qayeb galay waxaan munaasabada iyaguna goob joog ka ahaa qawmiyado kale oo Afrikan ah iyo waliba mas’uuliyiin qoxootiga Ormiya kasocday oo halkaasi ku soo bandhigay dhibaatooyinka ay qoxootigoodu lakumaan ka hor imaatinka xerooyinka qoxootiga dalka Kenya.
Gudoomiyaha gudiga qoxootiga Ogaadeeniya ee dalka Kenya ayaa si gooni gooni ahayd oola kulmay mas’uuliyiintii hay’adaha qoxootiga ee munaasabadan ka qayeb galay.
Hadaba waraysi dheer oo Idaacada Radio Xoriyo ay la yeelatay Gudoomiyaha ayaa ku dhagaysan doontaan warbixinta oo dhamays tiran